Dowladda Xabashida Itoobiya ayaa ka warbixisay khasaaraha ka dhashay rabshado bishii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada Addis Ababa iyo hareeraheeda.
Abiy Axmed oo ah R/wasaaraha Itoobiya ayaa shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Addis Ababa ku sheegay in dad ku dhow 100 qof lagu dilay rabshadaha oo dhaxmaray qowmiyado iskasoo hor keedo iyo ciidamada dowladda oo dhinac ah.
Wuxuu sheegay inta qof ee dhimatay islamarkaana dowladdu diiwaan gelisay ay gaarayaan 86 qof balse meesha kama saarin in ay jiraan dad dhintay oo aan la diiwaan gelin.
R/wasaaraha dowladda Xabashida Itoobiya wuxuu qiray in dadka dhintay qaarkood ay ciidamada ammaanka ay toogasho ku dileen "76 qof ayaa ku dhintay iska hor'imaadyadii dadka shacabka ah dhaxmaray halka inta kale ay dileen ciidamada Ammaanka" ayuu yiri Abiy Axmed.
Cadaadka dadka ay dowladdu qiratay in ay dishay ayaa gaaraya 11 qof waxaana arrinkaas si aad ah udiiday kooxaha mucaaradka ah oo sheegay in kala bar dadka dhintay ay toogteen ciidamada booliska.
Dadka ku dhintay rabshadihii ka dhacay Itoobiya 23-kii bishii Okotobar badankood waxay kasoo jeedaan qowmiyadaha Amxaarada iyo Oromada, Nin mucaarad ah oo lagu magacaabo Jowhar Mux'med ayaa xukuumadda Itoobiya ku eedeeyay in ay caburinayso mucaaradka.
Tan iyo markii uu xilk qabtay Abiy Axmed ayay Itoobiya luga lagashay fatqalado siyaasadeed,dagaallo qowmiyadeed iyo Inqilaabyo melleteri oo dhammaantood gallaaftay nolosha kumanaan kun oo qof.